Shaqooyinka Shaqada Dibada ee Fursadaha Shaqada ee Magaalada Dubai 🥇
Tilmaame Ku Saabsan Uber Driver ee Darawalka & Taxi
Bixinta Shaqada Dibedda
Shaqo weyn Fursad la leh shirkadda Dubai City
Bixinta Shaqada Dibedda. Duulimaad weyn oo Dubai ah. UAE Raadinta goobaha shaqo ee riyada. Halkan adiga ayaa kuu ah. Shirkadeena ayaa bixisa talooyin yaab leh oo loogu talagalay shaqaalaha maxalliga ah. Iyo sidoo kale qurbo joogta dibada. Taasina waxay dhammaan horseedaa in laga helo shaqo kaamil ah Imaaraadka Carabta.
Shaqooyinka bannaan ee shaqooyinka banaan waxay u guureen dhaqaalaha UAE. Ilaa illaa Expo 2020, mashruuca cusub ee shaqooyinka banaan ayaa koray. Soo hel shaqooyinka bannaan ee ku yaalla wadamada Khaliijka. Waxaan caawineynaa ajaanib si aan shaqo uga helno Dubai. Shaqaalaha caalamiga ah ee caalamiga ah way awoodi karaan suuqa shaqada ee Dubai sidoo kale kooxdeena Dubai Guide Guide. Maqaalka, waxaan isku dayi doonaa inaan ku tusno qiimaha nolosha ee UAE. Xaqiiqdii, maxaa dad badani u soo guureen Imaaraadka.
Waxaan kor u qaadnay in ka badan 80% codsiga xirfaddas. Ku bilaw shaqo ee Dubai. Waxaa naloo dhiirrigeliyay shaqaale kasta oo ku shaqeeya UAE. Si aad u hesho shirkad mustaqbalka ee UAE. Shaqada dibedda ee magaalada Dubai waa had iyo jeer u furfuran figradaha. Ma tihid qof kaliya oo raadinaya shaqooyinka banaan ee banaan ee ku yaalla UAE.
Qiyaastii waxaa jira qiyaastii 4- 5 milyan oo shaqo doon ah gudaha UAE. Bil kasta yaa adiga oo kale ah ku riyoonaya shaqooyinka Dubai. Marka maskaxda ku hay inaad u baahan tahay inaad hubiso inaad ku xirnaato dadka kale. Waxay ku siin karaan gacan qabasho, si Shaqo ka helista UAE. Ha u ekaan dadka kale, ha sugin nasiibkaaga. Samee inuu dhaco. Shaqo degdeg ah ula shaqeyso shirkadda Dubai City.
Farsamada iyo Xirfadaha Shaqada ee UAE
Shaqada si dhakhso ah u shaqeyn, mar dambe ma macno noqonayso inaad ka fogaato shaqada. Dubai Dubai ayaa aheyd soo jiidashada malaayiin ka mid ah dadka isticmaala taleefannada gacanta. Maalin kasta oo shaqo doonka ah waxay yimaadaan UAE. Isla mar ahaantaana, shaqaalihii shaqo-doonka ee adduunka casriga ah sidoo kale waxay jecel yihiin Qatar iyo Jordan. Dhinaca kale, dadka Ingiriiska ku hadla. Sidoo kale leh fursado aad u wanaagsan oo lagu heli karo shaqada Dubai. Gaar ahaan ka soo jeeda Yurub ayaa helaya shaqooyin degdeg ah.
Ku noqo shaqo-dooneyaasha ugu muhiimsan ee Imaaraadka. Waa hawl shaqo oo loogu talagalay dadka ka yimid Pakistan iyo Hindiya. Inta badan Shaqaalaha ajnabiga ah ee ajnabiga ah ee India. Had iyo goorba way is-hoosaysadaan iyo astaamaha diyaar u ah inay raadiyaan nasiib wanaag. Sannadaha soo socda, waxaan sidoo kale arki karnaa Tirada sii kordhaysa ee haweenka uurka leh. Sababta oo ah haweeney u leedahay hab wanaagsan oo loogu talagalay shirkadaha. Marwalba way wanaagsan yihiin. Lahaanshaha xirfadaha adeegga macaamiisha caadiga ah. Iyo sidoo kale waxay ku dhow yihiin marwalba wanaagsan.
Tan iyo Abu Dhabi iyo Dubai si koror ah ayey u kortay. Dowladda UAE waxay bilaabaysaa shaqaalaysiinta cusub shaqooyinka caalamiga ah kuwa wax raadinaya. Oo waxay shaqo raadinayaan muddo tobanaan sano ah. Xaqiiqdiina, Dubai waa shaqo weyn!. Sababtoo ah waxaad ka heli kartaa shaqooyin cajiib ah oo aad u dhaqso badan. Gaar ahaan haddii aan is barbardhigo dalalka kale sida Qatar ama xataa Shaqooyinka iyo shirkadaha Sacuudi Carabiya.
Shaqooyinka Shaqada Dibedda ee Fikradaha
Shaqooyinka Adduunka oo ka socda Dubai
Waxaan halkan u joognaa inaan kaa caawinno in lagu meeleeyo magaalada Dubai
Raadinta Shaqada Caalamiga ah ee Dubai
Guud ahaan, ku dhowaad qiyaastii 8.6 million. Dadka shaqo doonka ah ee dalka jooga. Inta badan dadka raadinta shaqo faa'iido leh oo ka timid Hindiya ilaa Dubai. Iyadoo booqanaya Imaaraadka Carabta. Isla markaa, 9.2 milyan oo dad ah oo ku nool UAE waa dadka ajnebiga ah.
Ka dib dhan, sidoo kale aad fursad u helid shaqo. Sida laga soo xigtay Dowladda UAE. Magaalada Dubai iyo Abu Dhabi waxay noqon doonaan shaqooyin badan oo furan ilaa 2020 Expo. Xaqiiqdii qiyaasaha ugu dambeeyay. Muujinaya taas Dhaqaalaha Emiratis wuxuu ka dhigeysaa kaliya 20% boqolkiiba wadarta. Waxay kobcisaa dhaqdhaqaaqa Bariga Dhexe.
Waxa ugu horreeya ee lagu xasuusto UAE. Dubai iyo Abu Dhabi Waxaa loo arkaa magaalooyinka ugu wax soo saarka badan GCC. Meel kale oo muhiim u ah qurbejoog badan. Raadinta xirfad caalami ah. Guud ahaan hadalka, waqti qaado. Si kasta oo ay u fiicantahay khibrada aad u leedahay. Shaqo raadsasho caadi ah waxay qaadataa qiyaastii bilaha 6 bilood. Xitaa shaqooyinka aasaasiga ah waxay bixiyaan dalabyo sida Xirfadlaha hoteelka ee UAE.
Laakiin dhinaca dhinaca wanaagsan. Waxaad ka heli kartaa shaqo-ka caalamiga ah bartayada ku taal Dubai ee ku taal Abu Dhabi iyo Dubai. Gaar ahaan haddii aad ku saleysan tahay dibadda. Waad sii wadan kartaa shaqo ka raadso Dubai. Waxba kuma xirna qaybaha shaqooyinka aad raadineyso shaqo. Qeybta shaqada ee aad ka mid tahayna waad heli kartaa shaqada. Xaaladahaas oo kale, waxaad ka raadsan kartaa shaqo dalal ka badan dhowrista. Tusaale ahaan Saudi Arabia, Qatar ama xitaa Kuwait.
Si kale loogu dhigo, kumanaan fuliyayaal ah ka shaqeynta shaqooyin mushahar fiican leh ee Imaaraatka. Caddaynta ugu badan ee khasabka ah taasi waa Wakaaladaha Shaqada Caalamiga ah. Dhammaantood waxay xafiis ku leeyihiin Imaaraadka Carabta. Aasaaska taas waxaad fursad u leedahay inaad shaqo ku hesho Dubai. Waxba ma laha khibrada aad leedahay.
Shaqada dibada ee Dubai
Dhinaca taban, dad badan oo shaqo doon ah ayaa reerahooda ka taga. Kadib markay imaanayaan Dubai. Xaaladahaas awgood, waxaad ka heli kartaa shaqo fudud sida darawal taksi. Sidaa darteed shaqaalaha dhismaha ee dhismaha waa ok ok bilowga ah. Qaar shaqooyinka waxaa laga heli karaa UAE isla markiiba.
Sababtaas awgeed, waxaad ku bilaabi kartaa mushahar hooseeya. In si kale loo dhigo, kasbashada mushaharka sareeya Xaqiiqdi wuu caawin doonaa adiga iyo qoyskaaga. Magaalada Dubai, waxaad ku kasban kartaa mushahar canshuur la'aan ah. Kadib lacag dib ugu diro guriga. Qoyskiina waxay u diri karaan caruur iskuul ka wanaagsan. Sidoo kale tixgeli qaar shaqooyinka Google ee Dubai. Ma sahlana in la helo oo laga gudbo wareysiga. Laakiin hubaal, waxaad shaqo ku heli kartaa xafiiskooda.
Mid ka mid ah kuwa ugu fiican shaqooyinka bannaan ee ajaanibta ah ee aad ka heli karto bangiga qaybta. Hase yeeshee, aad ayay u sarreeyaan. Waxaadna u baahan tahay inaad khibrad xoog leh ku leedahay suuqa shaqada ee UAE. Shirkadaha ugu fiican waa qorista shaqooyinka bannaan ee Dubai laga bilaabo aduunka oo idil. Waxaad shaqo ka heli kartaa Hindiya oo aad ka waraysan kartaa wareysiga skype.
Shaqooyinka ajnabiga ah ee bannaanbaxyada ka qaadaaya Imaaraadka
Waa in la xasuustaa iyada oo loo socdo u dhaqaaqida Dubai. Waa inaad xasuusataa inay kor u kici doonto qiimaha nolosha. Dubai waa magaalada ugu fiican ee laga shaqeeyo. Dhanka taban, aad ayey qaali u tahay. Dawladda Imaaraatka Carabtu waxay kordhisay dadaallada ay ku doonayso inay qaran ku shaqaalaysiiso shisheeye Tusaale ahaan, Hindiya iyo dadka shaqo doonka ah ee Pakistan hadda waxay leeyihiin hab sahlan oo lagu helo shaqo Dubai.
Natiijada shaqaaluhu iyo heerarka shaqa la'aanta ee joogtada ah. The UAE waxay bilaabaysaa casuumaada qurbaha. Kaliya maaha wadamada GCC. Dadku waxay bilaabaan raadinta shaqada Batroolka iyo Gaaska. Sidoo kale, waxaad ka heli kartaa mid aad u wanaagsan fursadaha shaqada ee Abu Dhabi ee baabuurta. Markaa hubso inaad haysato CV-kaaga oo uu qoray macalin xirfadle ah ama madaxa sare.
Wax weyn ma aha mid kasta shaqo raadiye wuxuu shaqo ku heli karaa Dubai. Intaa waxaa dheer, expats waxay shaqooyin ka helayaan Dubai. Qaarkood iyaga oo ka tagaya Imaaraadka. Si fudud ayaga ayaa dooranaya. Qaarkood waxay helaan lacag ku filan inay ganacsi uga furaan waddankooda. Ama soo noqo weheliso waayo-aragnimo ganacsi oo wanaagsan. Dubai iyo Abu Dhabi. Wali waxaa sii kordhaya ganacsiga loo yaqaan 'acumen'.
Xaaladahan oo kale, guud ahaan gobolku wuxuu ku yaalaa riyo riwaayad ah. Xaqiiqdii, lataliye qorista ku saleysan Dubai. Had iyo jeer sugeyso resumeygaaga. Laakiin waa in lagu xasuustaa qaar expats ayaa dooranaya inay ka baxaan Dubai. Sababta oo ah Imaaraadku wuxuu u noqday dariiq qaali ah oo ay ku noolaadaan. Kiiskan qaar shaqo doonka ah ayaa shaqooyin dheeraad ah ka helay Uber. Ka walwalsan tahay amniga xirfadda.
Shaqooyinka ku jira dibadda ee ardayda qalin-jabisa Hindiya
Shaqooyinka Dubai ee India qalinjabiyey. Qaar ka mid ah, waa go'aanka ugu wanaagsan waayo xirfad nololeed macalin ahaan. Dhinaca taban Shirkadaha Magaalada Dubai. Guud ahaan marka laga hadlayo, sii shaqaalaynta kuma sii soconayso mushaharka badan. Iyagu way caqli badan yihiin shaqo ka raadinta Poland. Oo waxay bilaabaan inay siiyaan mushahar hoose shaqaalaha reer galbeedka.
Hadda waxaan eegeynaa shaqaaleysiiyaan dadka shaqo doonka ah ee Hindida ah. Waxaan la galnaa dhowr qandaraas Shirkadaha Dubai. Waxa ugu horeeya ee lagu xasuusto waad awoodaa u xajiso resumeyga Dubai. Uma baahnid inaad aadid UAE waxaad dhimi kartaa qarashaadka. Kaliya u soo dir CV shirkadeena hadaad tahay arday qalin jabiyay waxaan kaa caawin doonaa inaad shaqo hesho.
Khibradeena awgeed shaqaaleysiiyaha marwalba wuxuu dhahaa. The go'aanka dib u dejinta waxaa sameynaya socdaalka. Maahan wakaaladaha shaqaaleynta. Marka iska hubi inaad xiisaynayso ku filan. Iyo hadaad Hindi tahay ama Koonfur Africa oo shaqo raadinaysa Dubai. Dhab ahaan, waxaad ku jirtaa meel ku habboon.
Shaqooyinka Dubai ee booqashada Pakistani
Inta badan caalamka u yeerayaasha xarumaha shaqada ee xarunta. Horay ayey uga soo guureen wadankoodii hooyo iyagoo shaqo u aaday Dubai. Gaar ahaan shaqaalaha Aasiya raadinta shaqooyinka Dubai ee Pakistan. Iyo badiba waxay helayaan natiijooyin shirkado waaweyn oo shaqaaleysiinaya UAE. Laakiin dhab ahaantii, habkani marwalba kuma caawin karo dhulka shaqo ee Emirates. Waxaad u baahan doontaa inaad si aad ah u shaqeyso si aad halkaas u hesho.
Booqdayaasha Pakistani waxay leeyihiin dhowr siyaabood oo ay ku helaan shaqo. Mid ka mid ah waa inay tagaan bartamaha magaalada. Iska daa CV-ga oo isku day si ay u dhaafaan wareysiga socodka ee Dubai. Tani waa nooc ka mid ah qaabkii hore laakiin wali si fiican ayuu u shaqeeyaa marka la eegayo shaqo raadinta. Mararka qaar habka hore u qaabaysan wuxuu u shaqeyn doonaa shaqaale doonaya. Waxay kaa caawin doontaa inaad soo bandhigto naftaada mustaqbalka shaqeeyayaasha Abu Dhabi iyo Dubai City.
Hadda waa inaad weydiisaa hmaadaama aad shaqo ku leedahay Dubai oo ku saabsan fiisada booqashada?. Nasiibdarro qofkasta oo jeclaan lahaa inuu shaqo ka bilaabo Dubai ama Abu Dhabi. Fiisaha ayaa lama huraan u ah inuu ku noolaado UAE. Dhinaca taban, fiisaha kaliya ee kuu shaqeyn doona waa fiiso shaqeyneysa.
Shirkadda Dubai City waxay kuu hirgelisay adiga. Kooxdayada shaqaalaynta ayaa diyaarisay talooyin iyo hagid dhamaystiran oo loogu talagalay u soo guurista Dubai. Iyadoo tan maskaxda lagu hayo, waxaad ka heli kartaa xoogaa macno ah. Sida loo sameeyo Shaqaalaha Baakistaan ​​waxaa lagu meelayn karaa UAE.
Shaqada dibedda Shaqooyinka banaan baxa
Haa, hadda waxaan leenahay ajinebi guud oo shaqo raadinaya shaqooyin banaan oo banaan. Sababtoo ah waxaa jira shaqaale kale oo doonaya inay shaqo ka helaan UAE. Tusaale ahaan, Filipino dadka raadinaya shaqo ku sugan UAE. Qatari, xitaa Sacuudi Carabiya waxay raadinayaan meeleynta Abu Dhabi ama Dubai. Waa wax fudud sababta oo ah UAE waa meesha ugu fiican ee lagu shaqeyn karo. Tusaale ahaan Dubai, way badan tahay fududeeyso inaad naftaada u shaqeyso. Dhammaan waxaad u baahan tahay inaad sameyso waa diiwaan gelineysaa faahfaahintaada goobaha shaqada qaarkood. Ka dibna sugitaanka shaqooyinka soo bandhigaya si ay ugu soo gudbaan sanduuqaaga emailka.
Imaaraadka Imaaraadka Carabta, waxaad ka heli kartaa wax badan oo qalab qorista oo aan jirin. Tusaale ahaan Macluumaadka shaqooyinka Dubai & shaqaalaynta ee shaqo doonka. Meesha aad ku biiri kartid adigoo gujinaya xiriirinta martiqaadka. Kadibna codsigaan, ugu dambeyntii waad la hadli kartaa maamulayaasha qorista. Codso shaqo bannaan maamulayaasha shaqo-qorista si toos ah.
Sidoo kale waa inaad fiirisaa dib u eegista shaqaaleysiinta. Kumaa shaqaaleysanaya Dubai? Shaqooyinka banaan ee shisheeyaha?. Waa maxay goobta shaqada lagu dhejiyo shaqooyinka ugu wanaagsan ee laga helo UAE. Iyo codso shaqooyinka Dubai. Dhammaanba taasi waxay si cad u xoojineysaa sida aad u shaqeyneysid ee shaqada canshuur la'aanta ah ee UAE.
Gabagabaynta shaqooyinka banaan ee banaan baxyada ah ee dadka ajnabiga ah
Shaqooyinka bannaan ee shaqooyinka banaan waxay la kulmaan dhawr qaybood oo shaqo ah. The shaqooyinka suuq-geynta ee Dubai iyo Abu Dhabi waxaa loo heli karaa si aad uga fudud kuwa kale. Marka, shisheeyaha cusub waa inay u tixgeliyaan waaxdan shaqaalaysiinta sida ikhtiyaarka ugu dhakhsaha badan ee shaqada. Shirkadda Dubai City waxay had iyo jeer ku dhiirrigelisaa dadka cusub inay si adag u shaqeeyaan.
Magaalada Dubai, majiraan majiraan furaha shaqada. Shirkadaha kala duwan ee Dubai ayaa shaqaaleynaya dhowr bilood. Sidaas darteed waa inaad hubaal ka qaadataa shaqo raadinta UAE heshiis mudo dheer ah. The shaqooyinka ajnabiga ah shaqooyinka bannaan ee qurbaha ayaa qof walba u furan. Hubso inaad ku imaan doonto UAE. Qaado kayd aad u badan maxaa yeelay Imaaraadku waa qaali.
Weligaa ha quusan, marwalbana isku day inaad hesho waraysiyo-socod. Ku xir sidoo kale maareeyayaasha shaqaaleynta inta ugu badan ee aad awoodid. Ku dheji CV-gaaga goobo shaqo oo aad u badan. Tusaale ahaan, waxaad ka heli kartaa Bayt iyo Careerjet. Maamulayaasha shaqaaleynta iyo ganacsade waa shaqaaleynta UAE maalin walba. Su'aashu waxay noqonaysaa codsigaaga miiska dhexdiisa?
Shirkadda Dubai City ayaa hadda bixinaysa Tilmaamaha wanaagsan ee Shaqooyinka Dubai. Kooxdayada ayaa go'aansaday in ay ku daraan macluumaadka luuqad kasta ee noo Dubia way soo baxday. Marka, iyada oo tan maskaxda lagu hayo, waxaad hadda heli kartaa tilmaamo, talooyin, iyo shaqo ka helay Imaaraadka Carabta oo leh luqaddaada.